တရုတ်လျှပ်စစ်စကူတာများ နှင်းများအတွက် ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူ |ဟိုဘ
လျှပ်စစ်စကူတာများသည် အချိန်ဖြုန်းခြင်း အကြောင်းရင်းသုံးခု
သင့်လျှပ်စစ်စက်ဘီးဝယ်ယူမှုအကြောင်း သင်နှင့်စကားပြောရန် ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်နေပါသည်။ဆိုင်းထိန်းစနစ်ကို သင်ရွေးချယ်ပါက သင့်ခရီးကို သန့်ရှင်းစေမည့် စကိတ်ဘုတ်ပုံစံ တုတ်ထိုးသစ်သားကြမ်းပြင်များကဲ့သို့ ပျော့ပြောင်းနိုင်သော အလူမီနီယမ်နှင့် လေတပ်နယူးမက်စ်ဘီးများထက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဆင်တူသော မတူညီသောရွေးချယ်မှုများကို ရှာဖွေပါ။မေးခွန်းများကို ဖြေဖျောက်ရန် သင့်အား အစွမ်းကုန် ကူညီပေးပါမည်။Q8၊ အကောင်းမွန်ဆုံး အသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်ခြင်းကား အဘယ်နည်း။Model Y တွင် အလူမီနီယမ်၊ ဟိုက်ဒရိုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ဖရိန်ဖြင့် ထူထဲပြီး ခိုင်ခံ့သော တည်ဆောက်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ဘက်ထရီသက်တမ်း၊ အရှိန်အဟုန်၊ အဓိကအမြန်နှုန်း၊ တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ခရီးများအားလုံးသည် ကျွန်တော်စီးသော ပထမဆုံးနေ့နှင့် အတိအကျတူညီနေပါသည်။
သင့်လျှပ်စစ်စက်ဘီးဝယ်ယူမှုအကြောင်း သင်နှင့်စကားပြောရန် ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်နေပါသည်။ဆိုင်းထိန်းစနစ်ကို သင်ရွေးချယ်ပါက သင့်ခရီးကို သန့်ရှင်းစေမည့် စကိတ်ဘုတ်ပုံစံ တုတ်ထိုးသစ်သားကြမ်းပြင်များကဲ့သို့ ပျော့ပြောင်းနိုင်သော အလူမီနီယမ်နှင့် လေတပ်နယူးမက်စ်ဘီးများထက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဆင်တူသော မတူညီသောရွေးချယ်မှုများကို ရှာဖွေပါ။မေးခွန်းများကို ဖြေဖျောက်ရန် သင့်အား အစွမ်းကုန် ကူညီပေးပါမည်။Q8၊ အကောင်းမွန်ဆုံး အသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်ခြင်းကား အဘယ်နည်း။Model Y တွင် အလူမီနီယမ်၊ ဟိုက်ဒရိုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ဖရိန်ဖြင့် ထူထဲပြီး ခိုင်ခံ့သော တည်ဆောက်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ဘက်ထရီသက်တမ်း၊ အရှိန်အဟုန်၊ အဓိကအမြန်နှုန်း၊ တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ခရီးများအားလုံးသည် ကျွန်တော်စီးသော ပထမဆုံးနေ့နှင့် အတိအကျတူညီနေပါသည်။လျှပ်စစ်စကူတာနှင့် စက်ဘီးဘက်ထရီများကို ပြောင်းလဲသည့်အခါ ဘက်ထရီအားလုံးကို တူညီသောအချိန်နှင့် တူညီသော ဘက်ထရီပုံစံဖြင့် ပြောင်းလဲပါ။တရုတ်လူမျိုးများသည် ဘက်ထရီအားသွင်းချိန်ကို4နာရီအောက်သာထားပြန်သည်။သင်ရွေးချယ်သော ဟန်ပန်အပေါ်မူတည်၍ တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦး သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ထို့အပြင် ယခုအခါ စက်ဘီးအများအပြားသည် သင့်အကွာအဝေးကို နှစ်ဆတိုးနိုင်စေမည့် ဒုတိယဘက်ထရီကို ကျောခိုင်းရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် Electric Bike Company Model X တွင် သုံးမျိုး (အနောက်ဘက်တွင် တစ်လုံးနှင့် ရှေ့ခြင်းတောင်းတွင် နှစ်ချက်၊ မိုင် 200 အကွာအဝေး)။ဤနေရာတွင်ပြသထားသည့် ဟန်နာသည် $1,949 မှစတင်သည် သို့သော် ဘက်ထရီတစ်လုံး သို့မဟုတ် နှစ်လုံးပါသည့် ဝင်ပေါက်တောင်း၊ နောက်ဘက်ခန်း၊ စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ထည်အရောင်များ၊ ဆိုင်းထိန်းထိုင်ခုံတိုင်၊ GPS ခြေရာခံကိရိယာနှင့် အပိုဆောင်းပစ္စည်းများပါသည့် ပြဿနာများပါဝင်ရန် (ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်) အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။လက်ရှိ EICMA တွင်ပြသနေသည့် KQi2 သည် လျှပ်စစ်စကူတာအိမ်သုံးတွင် အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် တစ်နာရီလျှင် 25 ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိပြီး စျေးနှုန်းမှာ ယူရို 499 ဖြစ်သည်။ဥပမာအနေဖြင့်၊ ခေါက်စကူတာလျှပ်စစ်ကားများသည် e-scooter စျေးကွက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ဒီထက်ပိုတည်ငြိမ်မှုကိုပေးဖို့အတွက်၊ အရွယ်အစားအားလုံးဟာ လုံးဝကွဲပြားတဲ့ ဘီး5ဘီးကို ရနိုင်မှာပါ။hardtail suspension သည် ပို၍စျေးကြီးသော full-suspension trail လျှပ်စစ်စက်ဘီးများကဲ့သို့ တူညီသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို မပေးသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ထိုက်တန်သောပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။အပိုဘေးကင်းမှုသည် စိတ်ငြိမ်သက်မှုအချို့ကို သံသယဝင်စေပြီး သင့်ငွေကို တန်ဖိုးရှိစေမည်ဖြစ်သည်။သို့သော် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တန်ဖိုးကို ဇွတ်ထိန်းသိမ်းပါ။သမားရိုးကျ စက်ဘီးထက် Scooter တစ်စီး ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။
ဘီးသုံးဘီးနှင့် ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များစွာပါရှိသောကြောင့် လူများစွာက ၎င်းကို ခံနိုင်ရည်မရှိဟု ယူဆကြသည်။သူတို့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများစွာနဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာ နားလည်ဖို့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ထို့အပြင် e-scooter စီးနင်းရန် ရွေးချယ်မှုသည် ဒုတိယအချက်၏ တွန်းအားဖြစ်နိုင်သောကြောင့် အဆိုပါအားနည်းချက်ကို မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။၎င်းနှင့် ဝင်ပေါက်နှင့် နောက်ဘက် ဆိုင်းထိန်းစနစ်အပြင် ဒီဇိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော ဖရိမ်သည် WideWheel မှ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်မှန်းထားသည့် အဆိုပါချောမွေ့သောခရီးအတွက် ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုကို ပေါင်းထည့်ထားသည်။ခေတ်မီနည်းပညာအတွက် စက်ဘီး၏ အပ်နှံမှုသည် LED နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစနစ်၊ LCD မျက်နှာပြင်၊ သော့မဲ့စက်နှိုးခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခိုးယူမှုသတိပေးစနစ်တို့ဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ခေတ်မီဘက်ထရီ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ပရိုဂရမ်များသည် ဘက်ထရီ၏ သက်တမ်းကို ကြာရှည်အောင် ကူညီပေးသည်။အဖုအထစ်များ၊ ခုန်ခြင်းများနှင့် တိမ်းစောင်းမှုများကို ရှောင်ရှားရမည့် အဖြစ်အပျက်များတွင် ဘဝသည် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းနိုင်သော်လည်း သင်သည် ပြင်းထန်သော၊ ဟယ်လို-စပီကာ BMX ပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်တွန်းလှန်ထားသော စကူတာပေါ်တွင် ရှိနေသည်ကို သတိရပါ။အဖြေ- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစကူတာ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများစွာကို တင်ပြပါမည်။အဖြေ- ဤစကူတာ၏အမြင့်ဆုံးဝန်မှာ 160KG (352 ပေါင်) ဖြစ်သည်။8.High stability sturdy body.35 mm Aluminum alloy Non-slip deck.Max load ရာ့ငါးဆယ်ကီလိုဂရမ်။ဘက်ထရီအား ဝန်ကို သက်ရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ဗို့အားသည် ချက်ခြင်း ကျသွားသည်။ယခုအချိန်အထိ အလွန်ထိရောက်မှုအရှိဆုံး အချက်အချာကျသည့် မော်တာဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ အမြန်ဆုံးလျှပ်စစ်စကူတာဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယခင်ပုံစံများထက် ပိုမိုကြီးမားသော ဘက်ထရီဗို့အား (72 ဗို့) ဗို့အား (လေးဆယ့်ရှစ်ဗို့အစား) ဖြစ်သည်။6. အကယ်၍ သင်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး သင့်တွင် တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်မရှိပါက၊ သြစတြေးလျအစိုးရသည် သွင်းကုန်မူဝါဒကို မွမ်းမံထားသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘက်ထရီအားကုန်သွားသော စကူတာအား တင်ပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး အလားတူအချိန်မျိုးတွင် ဘက်ထရီအား သီးခြားစီ တင်ပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီကို သင်ကိုယ်တိုင် ထည့်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီ ပို့ဆောင်ခကို ပေးဆောင်ရန် အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည် $100 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် e-scooters များသည် dual raking စနစ်-ဝင်ပေါက်နှင့် အနောက်ဒစ်ခ်ဘရိတ်များကို ကာကွယ်ပေးပြီး မောင်းနှင်မှုကို အာမခံပါသည်။ဒါပေမယ့် 500 မှာတော့ 8-velocity Shimano Altus နဲ့ ဂီယာပြောင်းခြင်းနဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်ဒစ်ဘရိတ်များပါရှိပါတယ်။လျှပ်စစ်စက်ဘီးများသည် ရိုးရှင်းသော အပျော်စီးခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် 200 မှ 500 watts ကွဲပြားသည်။အခြားစက်ဘီးများသည် လှေကားထစ်များတက်ရန် လွယ်ကူစေရန် သေးငယ်ပြီး ပေါ့ပါးပါသည်။Billions in Change က Free Electric သည် နေအိမ်တစ်လုံးအား ကြည်လင်ပြတ်သားသောလျှပ်စစ်မီးဖြင့် ၂၄ နာရီပတ်လုံး အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် လုံလောက်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အား အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ပါဝါပေးနေသည့်အရာပေါ်တွင်သာ မှီခိုနေရသည်ဟု ဆိုသည်။အစောပိုင်းငှက်များအတွက် 30-% စျေးသက်သာသော်လည်း တမင်လက်လီလက်လီတန်ဖိုးမှာ US$ 799 ဖြစ်သည်။C-fee သည် ဘက်ထရီအား ဘယ်လောက်ကြာကြာ အားအပြည့်သွင်းနေသည် သို့မဟုတ် အားကုန်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
Li-ion 18650 ဆဲလ်များသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အကျိုးကျေးဇူးများရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အခြားဘက်ထရီသုံးပညာရပ်များထက် ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းနည်းပါးပြီး မှားယွင်းစွာအသုံးပြုပါက ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။ဤဆဲလ်အချို့ကို အဆင့်မြင့်စကူတာများ၏ ဘက်ထရီထုပ်များတွင်သာ တွေ့ရတတ်သည်။ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရသောလျှပ်စစ်စကူတာလျှပ်စစ်ဓာတ်သည်ထူးခြားသောအပိုင်းအခြားများပါ ၀ င်ပြီးအားသွင်းရန်အတွက်3နာရီမှ4နာရီကြာသည်။အထက်ဖော်ပြပါ Scooter Electrique နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင်ဖော်ပြထားသော ကြီးမားသောအားကစားနှင့် အပန်းဖြေပစ္စည်းများသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ အမျိုးမျိုးသော အားကစားနှင့် အပန်းဖြေပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၊ သင်သည် သင်၏အပိတ်အရင်းအမြစ်ကိုရွေးချယ်မှုထက်စော၍ မော်တာစကူတာကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသောဝယ်ယူမှုရွေးချယ်စရာများမှ သင်ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တိကျသော Scooter Electrique ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်ကို ရှာဖွေပြီး ထုတ်လုပ်သူများသည် သင်၏အနာဂတ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက် ကြီးမားသောထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် Cicig ရှိ ဆက်စပ်လျှပ်စစ်စကူတာပစ္စည်းများကို အများအပြားပေးဆောင်ထားသောကြောင့် သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။Schwinn သည် အရောင်အသွေးများစွာဖြင့်ပါရှိသော ဖက်ရှင်စကူတာတစ်စီးကို ထုတ်ပြခဲ့သည်။ဟိုက်ဘရစ်အတတ်ပညာဖြင့် တော်လှန်သော လျှပ်စစ်စကူတာသည် ခလုတ်တစ်ခု၏ အဆက်အသွယ်တွင် ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံး၏ အကောင်းဆုံးကို ပေးဆောင်သည် - ရိုးရှင်းမှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။Optibike ၏ ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုလုံးသည် အလွန်အကျွံစွမ်းဆောင်ရည်၊ လုံခြုံရေးနှင့် လည်ပတ်ရလွယ်ကူမှုတို့ကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်သည့် ဒီဇိုင်းဖြင့် အောက်ခြေအထိ ပေါင်းစပ်ထားသည်။မန်းဂနိစ်ပါဝင်မှုသည် ဘက်ထရီ၏အတွင်းပိုင်းခံနိုင်ရည်ကို လျော့နည်းစေပြီး အပူချိန်နိမ့်ကျသော အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း မြင့်မားသောလက်ရှိထွက်ရှိမှုကို ခွင့်ပြုသည်။အကယ်၍ သင်သည် အရပ်ရှည်သည် သို့မဟုတ် ပိုကြီးသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါက ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံး အလေးချိန်အပြင်၊ လက်ကိုင်ဘား အမြင့်ကို စမ်းကြည့်ပါက သေးငယ်လွန်း၍ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သော စကူတာသည် 'ငါက စကူတာ သူငယ်ချင်း' ဟု အော်နိုင်သည်ထက် ပိုမြန်အောင် chiropractor ထံ အမြန်ပြေးဖူးပါလိမ့်မည် ။ .စက်ဘီး၏ဂီယာကိုအသုံးပြု၍ ဂီယာနိမ့်သောတောင်ကုန်းကြီးကိုတက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အမှန်တကယ်မြင့်မားသောဂီယာဖြင့် (30mph အထိ) အမြန်တက်နိုင်သည်။ယခု၊ ဤနေရာတွင် အင်ဂျင်နီယာ geek bit ဖြစ်သည် - ဝက်ဝံများကို ABEC ဘုံစံနှုန်းဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ကျဆင်းလေ၊ တိကျမှု နည်းပါးလေဖြစ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် 1 မှ9အထိ လည်ပတ်နေပါသည်။ အဆင့်နိမ့်သည်ဆိုသည်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ် လျှောဆင်းသွားစေရန် အပိုကန်သင့်သည် အလွန်အကျွံ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ငန်းတစ်ကောင်ကဲ့သို့ ဝဲပျံရန် ကန်သွင်းရန် အားထုတ်မှုနည်းပါသည်။2. မှာယူမှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင် ထုတ်ကုန်နှင့် ကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်ရန် လည်ချောင်း၊ ဘရိတ်ဘား၊ ဘရိတ်ကြိုး၊ ခြေနင်းများကဲ့သို့သော အပိုပစ္စည်းအချို့ကို ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ သင်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်စကူတာ၊ စကူတာအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ/ရောင်းချသူသည် Maxmov Elwctric Scooter Foldable 500 Watt စျေးသက်သာစွာဖြင့် 36V ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီပါရှိသော၊ 2021 Maxmov စက်ရုံစျေးနှုန်း 800W 36V EEC/Coc အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် Max-Mobility Scooter နှစ်လုံး၊ on 2021 လူကြီးများအတွက် 500W EEC/Coc လျှပ်စစ်စကူတာ စသည်တို့ကို မောင်းနှင်ပါ။နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် Li-ion ဘက်ထရီများသည် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများနှင့်မတူဘဲ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ 10X ခန့်ရှိသည်။
သို့သော်လည်း စီးနင်းသူအများအပြားသည် ၎င်းတို့ဘက်ထရီအား အပြည့်အ၀မထုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ဘက်ထရီများကို ကလေးမွေးထားဆဲဖြစ်ပြီး အားသွင်းအလျင်နှင့် ပမာဏကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အထူးအားသွင်းကိရိယာများကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။အချိန်အကြာကြီး သိမ်းဆည်းသည့်အခါ ဘက်ထရီအား အချိန်အခါအလိုက် မြင့်အောင်ပြုလုပ်ရန် သေချာပါစေ။အစွမ်းထက်သော မော်တာသည် မျက်နှာပြင်ညီညာသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် မောင်းနှင်နိုင်သည်ဟု သေချာစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့အပြင် ထောင့်များကို 15 ဒီဂရီအထိ မောင်းနှင်နိုင်သည်။ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် စျေးတန်သော မော်ဒယ်လ်ဖြစ်လင့်ကစား သင်သည် ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် ရွေးချယ်မှုများကို ရှာဖွေနေသည့်အခါတွင် ၎င်းသည် ထိရောက်သော ရန်ပုံငွေတစ်ခုဖြစ်သည်။အခြားရွေးချယ်စရာများမှာ ညဘက်တွင် သင့်ရှေ့တွင် လမ်းများကိုမြင်နိုင်စေရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည့် LED ဝင်ပေါက်နှင့် နောက်မီးများဖြစ်သည်။MQi GT Evo ၏အခြားရွေးချယ်စရာများသည် အရောင်လေးမျိုး၊ သော့မဲ့စက်နှိုးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ခိုးယူမှုစတီယာရင်ဘီးသော့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။350 ကဲ့သို့ပင်၊ သင့်ရှေ့သို့ တွန်းပို့ရန် စက်ဘီးနင်းအကူအညီနှင့် တွန်းအားငါးခုကြား ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ Sydney ဆိုင်ငါးဆိုင်မှ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရယူလိုက်ပါ။ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် ဦးထုပ်ဆောင်းရန်နှင့် တံတောင်ဆစ်/ဒူးခေါင်းစွပ်များကို အကြံပြုကြပြီး မည်သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အငြင်းပွားရန် အကြံပြုထားသော်လည်း သင်ဝတ်ဆင်ရန်မရွေးချယ်ပါက ဘေးကင်းရေးသတိပြုပါ။ကနေဒါရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတည်နေရာများအတွက် သုံးစွဲသူများသည် ပို့ဆောင်ခ $150 USD ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။Target ရှိ Razor Electric Scooter ၏အစစျေးနှုန်းများသည် ယခုအချိန်တွင် အပြာရောင် E90 အတွက် $120၊ အနီရောင် သို့မဟုတ် ပန်းရောင် E100 အတွက် $130 နှင့် ငွေရောင် eSpark စကူတာအတွက် $150 ဖြစ်သည်။စီးနင်းမှု စတင်နှေးကွေးလာပါက၊ သင့်ဘီးပေါက်များကို စမ်းသပ်ပြီး အစားထိုးပြီး သင့်တာယာပေါ်ရှိ နင်းကို စစ်ဆေးပါ။Skyer သည် လုပ်ငန်းအစီအစဥ်နှင့် နည်းပညာများနှင့်အတူ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအထိ လိုအပ်ချက်သတ်မှတ်ချက်များမှအစပြု၍ ကျယ်ပြန့်သောဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးပါသည်။လျှပ်စစ်စကူတာများပါ၀င်သည့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မတော်တဆမှုနှုန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုရန်၊ Breyer နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် US တွင် ဒဏ်ရာရသူအမျိုးမျိုးကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးသည့် National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) သို့ လှည့်သွားပါသည်။ GPS နှင့် ဆင်တူသည့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာရှိသော စီးနင်းသူများ၊ ခိုးယူမှု ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် အဝေးမှ စောင့်ကြည့်ရေး အပါအဝင် အကူအညီစင်တာတစ်ခု။နမူနာအမှာစာနှင့် ရောစပ်ထားသော အမှာစာ/အရောင်ကို လက်ခံနိုင်သောကြောင့် ထိုက်တန်ပြီး အပူပေးဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ရလဒ်အနေနဲ့ တရုတ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ ဈေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍ စကားလုံး- ကျွန်ုပ်တို့၏တရုတ်ဂိုဒေါင်မှ သင်္ဘောသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။အကယ်၍ သင်သည် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဝယ်ယူရန် တရုတ် Eletr Elektro 3000W E Sccoter Eletrica De Trotinette Electrique 80 Km/H Elektro Roller Electric Scooter အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် တရုတ်ဝယ်မည် Eletr Elektro 3000W E Sccoter Eletrica De Trotinette ကို သင်မည်သို့ဝယ်ရမည်ကို အံ့ဩမိပေမည်။ /H Elektro Roller Electric Scooter ၊ လူကြီးများအတွက် China Eletr Elektro 3000W E Sccoter Eletrica De Trotinette Electrique ရှစ်ဆယ် Km/H Elektro Roller Electric Scooter နှင့် လူကြီးများအတွက် China Eletr Elektro 3000W E Sccoter ဝယ်နည်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် Electrique 80 Km/H Elektro Roller Electric ScooterPayPal Credit သည် သင့်အား ယခုအချိန်တွင် သင်လိုချင်သော စက်ဘီးဂီယာအားလုံးကို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အတိုးမဲ့6လထက် ပိုပေးချေရန် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပေးပါသည်။လေးစားအပ်ပါသော EU မိတ်ဆွေ၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ သင်္ဘောတင်ရန် ရွေးချယ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် အခွန်ပေးဆောင်ရန် မလိုပါ၊ အမှန်တကယ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို EU ဂိုဒေါင်မှ သင့်ထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး 3-7 ရက်အတွင်း လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
ယခင်- လျှပ်စစ်စကူတာ မိန်းကလေး
နောက်တစ်ခု: လျှပ်စစ်စကူတာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းမွန်သည်။
စျေးသက်သာသော2Wheeler Scooter ရောင်းရန်လျှပ်စစ်စကူတာ
စျေးအသက်သာဆုံး ရောင်းချရန် လျှပ်စစ်စကူတာ အမြန်ဆုံး Ele...
လူကြီးများအတွက် စွမ်းအားမြင့် လျှပ်စစ်စကူတာ...